Madaxda Maamulada Jubbaland iyo Koonfur-Galbeed oo Garowe soo Gaaray – Radio Daljir
Abriil 29, 2015 6:41 b 0
Arbaco, Abriil 29, 2015 (Daljir) — Madaxweynayaasha maamullada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ayaa maanta duhurkii soo gaaray magaalada Garoowe, waxaana sii diirran u soo dhaweeyay madaxda Puntland oo isugu jiray qaybo kala duwan.
Wafdigan ayaa lagu wadaa in ay maanta ka qayb-galaan shir ka furamaya Garoowe, kaasoo looga hadli doono hiigsiga 2016-ka, waxaana wafdiga ka socday labada maamul uga soo horeeyay Garowe madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shekh Maxamuud.
“Halkan waxaan u nimid inaan ka qayb-galno shir muhiim ah oo arimaha Somalia quseeya, maadaama waqtiga uu kooban-yahay “ ayuu yiri madaxweynaha maamulka KMG ah ee Jubba oo war kooban siiyay warbaahinta markii u yimid Garowe.
Madaxweynaha maamulka Koonfur-galbeed Shariif Xasan Sh. Aadan ayaa isna sheegay in uu ku faraxsanyahay imaanshihiisa Puntland, waxaana uu madaxda Puntland uga mahad-celiyay sida diiran ee Garoowe loogu soo dhaweeyay.
Waxaa la qorshaynayaa in maanta galinka danbe uu Garowe ka furmo shirkan wada tashiga ah ee u dhaxeeya dowladda Somalia iyo maamulada dalka ka jira, iyadoo si gaar ah diiradda lagu saari doono arimo muhiim ah oo la xiriira Hiigsiga la qorsheeyay iyo la dagaalanka xagjirnimada Somalia.
“Ujeeddada shirka Garoowe waa in dowladda dhexe iyo maamul-goboleed-yada dalka ka jira ay ka tashadaan sidii looga wada qeyb-qaadan lahaa dhisidda dowladnimada Somalia iyo in dalka la gaasiiyo isku-filnaasho buuxda oo ay dadka oo dhan ku mideysan yihiin,” ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya oo warbaahinta kula hadlayay madaxtooyada Puntland markii uu shalay yimid Garowe.
Ugu dambeyn, shirkan lagu qabanayo magaalada Garoowe ayaa wajigiisi koowaad waxaa lagu qabtay caasimadda Somaaliya,waxaana marka la soo gaba-gabeeyo laga soo saari doono qodobo la xiriira waxyaabaha la isku afagartay oo u badnaan doono hiigsiga 2016-ka iyo sida loo gaari karo.
Qormada 1-aad ee Radio Daljir